ဆောင်းရာသီမှာ နည်းစနစ်မှန်မှန် ဆဲလ်သေ ဖယ်ရှားကြမယ်။ - Hello Sayarwon
ဆောင်းရာသီနဲ့ အပြိုင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လေဒီလေးဖြစ်စေဖို့ဆိုရင် ဆောင်းရာသီမှာလည်း အခြားရာသီတွေလို ကြည်လင်တဲ့ အသားလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားဖို့ လိုမှာပါ။ ဒီတော့ ဆောင်းရာသီ အသားလေး ကြည်လင်နေအောင် ဘာလုပ်ရမလဲ……….
လွယ်ပါတယ်။ ဆဲလ်သေတွေဖယ်မယ်။ အစိုဓာတ်ထိန်းမယ်ပေါ့။ ဆောင်းရာသီက အသားခြောက်တယ်လေ ဆဲလ်သေဖယ်ရှားရင် အသားပိုခြောက်ပြီး ထိခိုက်မလားဆိုပြီး စိတ်ပူနေပြီလား။
စိတ်မပူပါနဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ ကြည်လင် ကျန်းမာတဲ့ အသားလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့အတွက် နည်းစနစ်မှန်မှန်နဲ့ ဆဲလ်သေ ဖယ်ရှား လိုက်ပါ။
ဆောင်းရာသီမှာ နည်းစနစ်မှန်မှန်နဲ့ ဆဲလ်သေ ဘယ်လို ဖယ်ရှားမလဲ………….
အသားအရေကို အထိရောက်ဆုံး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုရင် ဆဲလ်သေဖယ်ရှားဖို့ကလည်း မေ့ထားလို့ မရတဲ့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှု အဆင့်တစ်ခုပါ။ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ၂ ကြိမ် ဆဲလ်သေတွေ ဖယ်ရှားတာက ကျန်းမာတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းပါ။ ဒါကြောင့် အသားခြောက်တဲ့ ဆောင်းရာသီမှာ အသားအရေ ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင်
အာဟာရ ဖြည့်ပေးတဲ့ ဆဲလ်သေဖယ်ရှားတာမျိုးကို ရွေးပါ။
ဆဲလ်သေတွေ ဖယ်ရှားဖို့ exfoliator ရွေးတဲ့အခါ သဘာဝဆန်တာမျိုးဖြစ်ဖို့ လိုပါမယ်။ နောက်ထပ် ကြည့်ရမှာတစ်ခုက အစိုဓာတ်ထိန်းတာပါ ပါသလားဆိုတာပါ။ ဒီနှစ်ချက် ပြည့်စုံတာမျိုးက ဆောင်းတွင်းနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးပါ။
paraben-free ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်မယ် သဘာဝ အဆီလည်း ပါမယ်ဆိုရင် ဆောင်းရာသီမှာ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အသားအရေအတွက်တောင် သင့်တော်တဲ့ exfoliator လို့ ဆိုရပါမယ်။
တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်သာ ဆဲလ်သေ ဖယ်ရှားပါ။
ကျန်တဲ့ အချိန်တွေမှာ တစ်ပတ်ကို ၂ ကြိမ် ကနေ ၃ ကြိမ်လောက် ဆဲလ်သေ ဖယ်ရှားတယ်ဆိုရင်တောင် ဆောင်းရာသီမှာတော့ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်ပဲ ဆဲလ်သေ ဖယ်ရှားပါ။ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ဆဲလ်သေ ဖယ်ရှားတာက ကျန်းမာတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ထိခိုက်စေနိုင်လို့ပါ။
ရေနွေးနွေးနဲ့ ရေချိုးတာက သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေပြီး အရေပြားပေါ်က မွေးညှင်းပေါက်လေးတွေကို ပွင့်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားတာက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပါ။ ဒါကြောင့် ဆဲလ်သေတွေကို ရေချိုးချိန်မှာ ဖယ်ရှားပါ။
ရေနွေးနဲ့ ရေမချိုးချင်ဘူးဆိုရင် ဆဲလ်သေတွေ မဖယ်ရှားခင်မှာ ရေနွေးငွေ့ ခံပေးပါ။
ဆဲလ်သေ ဖယ်ရှားပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း ရေဓာတ်ဖြည့်ပါ။
ဆဲလ်သေတွေ ဖယ်ရှားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ အသားအရေကို ချက်ချင်း ရေဓာတ် ဖြည့်ပေးပါ။ ဒီလို လုပ်ပေးတာက အသားခြောက်တာ၊ အသားအရေ ထိခိုက်တာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ရော ရောက်ပါတယ်။
ဆဲလ်သေတွေ ဖယ်ရှားပြီးတာနဲ့ အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ် တစ်ခုခုကို ချက်ချင်းလိမ်းပေးတာက အသားအရေကို ကျန်းမာစေပြီး ကြည်လင် လှပစေမှာပါ။
ဆောင်းရာသီမှာ ကြည်လင်တဲ့ အသားအရေလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ အခုလိုမျိုး နည်းစနစ် မှန်မှန်နဲ့ ဆဲလ်သေတွေ ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
THE RIGHT WAY TO EXFOLIATE YOUR SKIN IN THE WINTER https://www.bebeautiful.in/articles/way-to-exfoliate-your-skin-in-winter Accessed Date 25 November 2020
5 Ways to Exfoliate Naturally https://www.treehugger.com/ways-to-exfoliate-naturally-4864316 Accessed Date 25 November 2020